narathein - သတင်း
နိုင်ငံရေးအမှုလိုက်ရင်း ရှေ့နေက တရားခံဖြစ် အန်အယ်ဒီရှေ့နေကြီးဦးအောင်သိန်းကိုထောင်(၄)လချ
ကိုဝိုင်း/ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အမှုများကို ဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးနေသော ရန်ကုန်မြို့မှ ရှေ့နေ
များဖြစ်သည့် ဦးအောင်သိန်းနှင့် ဦးခင်မောင်ရှိန်တို့အား တရားရုံးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုဖြင့် ၎င်းတို့၏
မျက်ကွယ်၌ တရားရုံးချုပ်က ထောင်ဒဏ် (၄) လစီအပြစ်ပေးလိုက် သည်။ အပြည့်အစုံ. . . .
အန်အယ်ဒီ နှုတ်ထွက်လူငယ်များ ဦးဝင်းတင်နှင့်တွေ့ပြီး ၄င်းတို့ပြဿနာတင်ပြ
မြင့်မိုးဇော်/ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ နှုတ်ထွက်လူငယ် (၂၀) ၀န်းကျင်သည် အဖွဲ ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှု
ဆောင်အဖွဲ့ ဝင် ဥိးဝင်းတင်အား နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ၄င်း၏နေအိမ်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး
ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အပြည့်အစုံ. . .
စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ၎င်းတို့အား အင်းစိန်ထောင်တွင်း သီးသန့် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာသို့ မိသားစုဝင်များကို လာရောက်ကြားနာခွင့်မပေးသဖြင့် တရားရုံးနှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းမပြုနိုင်ဟု ပြောကြား ကြောင်းသိရသည်။ . . .အပြည့်အစုံ
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်သံဃာတပါး ရဲဘက်စခန်းက ထွက်ပြေး
အင်တာနက်ကဖေးတွင် အဖမ်းခံခဲ့ရသည့်သံဃာ အလုပ်ကြမ်းစခန်းမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကာလမှာ ခေါင်းဆောင်
သံဃာတော်တစ်ပါးအဖြစ် ပါဝင် အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာ မကြာသေးခင်
ကာလက အလုပ်သမား အကျဉ်းစခန်းကနေ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားမှုကြောင့် လိုင်းကားပိုင်ရှင်များ ၀င်
၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ ။ ။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့အပြား လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာ ချထားခြင်း၊ ခရီးသည်တင်
လိုင်းကားများပေါ်အထိ တက်ရောက်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် ခရီးသည်ဦးရေ လျော့ကျ
သွားပြီး. . . . အပြည့်အစုံ
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းပေးရန် နအဖ
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုများကို ရုတ်သိမ်းပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေ
ထွေ ညီလာခံ၌ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကတောင်းဆိုလိုက်သည်။.
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။ စီမံချက်တရပ်အနေဖြင့် ယနေ့မှစ၍ မြို့တော်ခန်းမအတွင်းသို့ မည်သည့်လက်ကိုင်အိတ်မျိုးမှ ယူဆောင်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ခန်းမဧည့်အ၀င်ပေါက် တာဝန်ကျ
စည်ပင်ရဲများက ပြောသည်။ “ဒီ စီမံချက်ကို စတင်တာ မြို့တော်ခန်းမ လုံခြုံရေးအတွက်ပါ၊ မကြာ
မကြာ ဗုံးတွေ ပေါက်နေတဲ့အတွက် ခန်းမလုံခြုံရေးက. . အပြည့်အစုံ
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
သံလွင်ရေကာတာစီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပင်နှင့်သတ္တ၀ါ ဇီဝမျိုးစိတ်ပေါင်း
(၄၀၀) နီးပါးကို ခြိမ်းခြောက်အန္တရာယ်ပြုနေကြောင်း ကရင်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး
အဖွဲ့(KESAN)၏ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြသည်။ . . အပြည့်အစုံ
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာကို ရုတ်
သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တောင်းဆိုထားတာကို ကုလသမဂ္ဂ
အဲန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်
ထောင်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်း
အနားကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်
ချထားတဲ့ကြားက အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေ ကျင်းပခဲ့
ကြပါတယ်။ အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် တချို့ လည်း ဖမ်း
ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ထိုင်း အခြေစိုက်
သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးမာက သတင်းပေးပို့
ထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံ. .
သံဃာတော်များရဲ့ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြတာကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ တနှစ်
ပြည့်တဲ့နေ့မှာ စစ်တွေမြို့ က သံဃာတော် အပါး ၁၀၀ ကျော် ဒီနေ့ မြို့ ထဲကို အသံတိပ် မေတ္တာပို့
ကြွချီပြီး ဆုတောင်း ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံ. . .
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်စမ်းစစ်ရေး ကြေညာချက် အန်န်အယ်လ်ဒီ မရုပ်သိမ်း
စစ်အစိုးရ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်စမ်းစစ်တဲ့ ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့
စည်းဖို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တောင်းဆိုထားတဲ့ကြေညာချက်ကို ပြန်
လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့. . .အပြည့်အစုံ
၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ယမန်နေ့က အကျဉ်းထောင်မှပြန်လွတ်လာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု
ဆောင်ကော် မတီဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်အား ၎င်း၏ မူလတာဝန်ကို. . . . . . . . .
အပြည့်အစုံ. . . .
လွှတ်တော်ခေါ်ယူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတူ ပြန်သုံးသပ်ကြရန် စစ်အစိုးရကို
ပီတာအောင်/၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန်နှင့် ထိုလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်သုံး
သပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ကာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအား ပြန်လည်သုံးသပ်
ရေး ဆောင်ရွက်ကြရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က စစ်အစိုးရကို ယ
မန်နေ့က အထူးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်၍ ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ . . . အပြည့်အစုံ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ရန် မြန်မာကို လုံခြုံရေးကောင်စီ ထပ်မံတောင်းဆို
မြန်မာကို အရေးယူမည့်အချက်များမပါရှိဘဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံုံ
ဆွေးနွေးရေး ထပ်မံ တောင်းဆိုမည့် လုံခြုံရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြေညာချက်သာ ထွက်ရှိလာ
နိုင်ကြောင်း စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက် ထုတ်ပြန် သည့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစီရင်ခံစာ၌ ခန့်မှန်း
ရေးသားထားသည်။. . .အပြည့်အစုံ
ရှေ့ သီတင်းပတ်အတွင်း စက်တင်ဘာ၂၆ ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ထိုင်းသံရုံး
ရှေ့မှာ လေဘေး ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးရင်း စစ် အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချ တာကို
ခံခဲ့ရတဲ့ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်
် International Committee for Artist's Freedom (ICAF) ခေါ် နိုင်ငံတကာ အနုပညာရှင်
တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့က ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုကိုသိန်းထိုက်
ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။ . .အပြည့်အစုံ
ကိုသက် | စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ရှိလမ်းမများတွင် သံဃာတော် ၄ … ၅ ပါးခန့်သွားလာနေလျှင် အာဏာပိုင်များနှင့်ကြံဖွံ့၊
စွမ်းအားရှင်များက အချင်းချင်း စကားပြောစက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ကာ အဆင့်ဆင့်အသိပေးစောင်
့ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်ရှိ သံဃာ အ
မြန်မာ ပြည်သူ တရပ်လုံးက ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အကြောင်း ၁၉၈၈ခုနှစ်က နိုင်ငံတ၀ှမ်း
လုံး ပြသခဲ့ကြတဲ့ လူထု ဆန္ဒပြပွဲတွေကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်ကို
အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကဆိုရင် နှစ် ၂၀ ပြည့်လာခဲ့ပါပြီ။
. . . အပြည့်အစုံ. .
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကင်းမဲ့ 20/9/2008
မြန်မာ၊ တရုတ် နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြောဆို
ဒီဗွီဘီခေါ် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ၊ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်
မီဒီယာသမားတွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံ
ရန်ကုန်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာဏာပိုင်တို့ ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်း
ပျံ့၊ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထား
သတင်း - မိုးမခ (စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈)
ယနေ့ထုတ် ဂျာနယ်များ (မြန်မာတိုင်းမ်နှင့် ဘိုင်ဝိကလီး)တွင် မျက်နှာဖုံးနှင့် အချပ်ပိုများဖြင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ စက်တင်ဘာ ၁၉ နောက်
ပိုင်း တွေ့ကြမည်ဟု သတင်းလုပ် ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အပြည့်အစုံ
ဒေါ်စု လွတ်မြောက်ရေး Ingrid Betancourtကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြီးမှာ
မစ် အင်းဂရစ် ဘက်တန်ကုတ်
FARC ခေါ် လက်ဝဲကိုလံဘီယာသူပုန်တွေရဲ့
ပြန်ပေးစွဲမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ မစ် အင်းဂရစ်
ဘက်တန်ကုတ် (Ingrid Betancourt) က
မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုးထုတ်ဆဲ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံများစာရင်းထဲ ဒီနှစ်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်နေဆဲပဲ ရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ
သဘောတူညီချက်တွေအရ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လတာကာလအတွင်း
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကို ကုလထောက်ခံ မြန်မာ့အရေးဆက်လုပ်သွားမည်ဟု
UN/ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂက မစ္စတာအီဘရာဟင်ဂမ်ဘာရီ၏အားထုတ်မှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံလိုက်ပြီး မြန်မာ့အရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု
၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ မာလာရုံကျောင်းတိုက်ကို ယနေ့နံနက် အစောပိုင်း (၂) နာရီ
ခန့်၌ အာဏာပိုင်များက ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးသီလ၀ံသ သက်တော်
(၅၈) နှစ်ကို ဖမ်းဆီး သွားသည်ဟု
တရားခွင် လူထုအတွက် ဖွင့်ပေးဖို့ မင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့ တောင်းဆို
ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
တွေက သူတို့အပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့ ပြစ်မှုတွေအရ တရားခွင်မှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ စိတ်ပါဝင်စား
တဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို တရားခွင်မှာ လာနားထောင်နိုင်အောင်
နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗြိတိသျှနိုင်ငံ စကောတလန်နယ် ဒန်းတီးမြို့ ကောင်စီ ကနေ
Dundee Freedom Award လွတ်မြောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆု ချီးမြင့် လိုက်ပါ တယ်။
စစ်အစိုးရ လမ်းပြမြေပုံမှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိဟု အန်အယ်လ်ဒီအမတ်
၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အင်န်အယ်ဒီက စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကြေညာချိန်တွင် ပါတီဗဟိုအမှု
ဆောင်ဟောင်း သက်ကြီး စာရေးဆရာကြီး မောင်စူးစမ်းက စစ်အစိုးရလမ်း
ကြောင်းကို လက်ခံကြောင်း စာရေး။
၈၈ ခေါင်းဆောင်များကိုဒီနေ့ ရုံးထုတ်
စက်တင်ဘာ ၂ ရက်
ဒီနေ မနက် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို အင်စိန်အထူးတရားရုံး မှ ရုံးထုတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးထုတ်လာတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များမှာ မင်းကိုနိင်၊ ကိုဂျင်မီ ၊ကိုကိုကြီး ၊ကိုမင်းဇေယျ ၊
ကိုလှမျိုးနောင်ကို ဌေးကြွယ် ၊ကိုပန်တိတ်ထွန်း၊ ကိုမြအေး နဲ့ မမီးမီး တို့ အပါအ၀င် ကျောင်းသားပေါင်း
၃၀ ခန့် ရှိတယ်။အားလုံးကိုလက်ထိပ်ခတ်ထားတယ်။ သူတို့ က လက်ထိပ်ခတ်ရင် မထွက်ဘူးလို့ 
အခြေအတင်ဖြစ်ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ တောင်းဆိုချက်ကို ထောင်အာဏာပိုင်)